Topnews:Shirkadda Garguurte oo qandaraas dhan 22 Milyan xoog ku qaadatay
23 Febraury 2013 Waagacusub.com-Madaxweyne Hassan Garguurte ayaa Wafdigii Dowladda Turkiga ee Ra''isulwasare ku xigeenka horkacayay Cadaadis ku saaray in qandaraaska dhisida Wadooyinka Muqdisho la siiyo Shirkadiisa AlKheyraat hadii kale qandaraaska dhismaha wadooyinka lagu wareejin doono Shirkado ajnabiya.
Hay''ada Turkiga u qaabilsan Horumarinta ee TIKA ayaa saxiixday heshiiska dhisida Laamiyada Muqdisho oo isku wareeg ahaan gaaraya dhul dhan 22 KM . 22 KM Dhulka dhan waxaa ku baxaya lacag dhan 22 Milyan Dollar taas oo ka dhigan in Halkii Kiilo Mitir lagu dhisayo Hal Milyan oo Dollar.
Qandaraaska Dhismaha Laamiyada Muqdisho waxaa lagu wareejiyay Maamulaha Shirkadda Alkheyraat Ismaaciil Wardheere oo Madaxweyne Garguurte qaraabo yihiin.
Shirkadda Alkheyraat waxay xusul duub ugu jirtaa qandaraaska dhisida Garoonka hasse yeeshee waxaa kula dhegan Ra''isulwasare Saacid iyo Wasiir Ciilmooge.
Khilaaf u dhaxeeya Madaxweyne Hassan iyo Ra''isulwasare Saacid ayaa sababay inay si kala gooniya ula kulmaan wafdigii Turkiga ee Ra''isulwasare ku xigeenka Turkiga horkacayay.
Madaxweyne Hassan Garguurte iyo Raisulwasare ku xigeenka Turkiga ayaa si wadajira shir Jaraa''id u wada qabtay hasse yeeshee daqiiqado kadib waxaa Shir Saxaafadeed kaas la mida wada qabtay Ra''isulwasare ku xigeenka Turkiga iyo Ra''isulwasaaraha Somalia.
Sharciyan waxay ahayd in Ra''isulwasare Saacid qaabilo wafdiga Ra''isulwasare ku xigeenka hasse yeeshee taasi waxaa meesha ka saaray Madaxweyne Hassan oo guluf ugu jira inuu mudada u harsan lacag badan tacbado maadama uu shaaciyay inuu dib isu sharaxi doonin.
Farshaxaniistaha weyn ee Amin Arts ayaa sawir gacmeed ka sameeyay sharci darada iyo xaqiraada Kooxda Dam jadiid ee Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow ka mid yahay.